MM Customers donation – MM Online Shopping
Category: MM Customers donation
ဒီထဲတွင် MM customersတွေ့ လှူဒါန်းခဲ့သော ပုံရိပ်များကို တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
2020-03-28 Cherry Mask0 comment
2020-03-21 Cherry Mask0 comment
MM5နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့အတွက် အလှူပြုလုပ်ရန် စတင်စီစဉ်ခြင်း
2020-02-23 Cherry Mask0 comment
Feb 2015 ကနေ အစပြုခဲ့တာ အခုဆို MM က ၅နှစ်တောင်ပြည့်ခဲ့ပြီး .. ဒီနှစ်ထဲမှာ အပြောင်းအလဲတော်တော်များတယ် မနှစ်က Feb တုန်းက ပစ္စည်းထားလို့ အဆင်မပြေလို့ နေရာသစ်ပြောင်းရတယ် ဒီနှစ် ကျတော့ လည်း ပစ္စည်းတွေ့များလာလို့ နေရာသစ်ပြောင်းရတယ် နေရာသစ်အတွက် nov ကတည်းက အခန်းရှာ .. Dec အခန်းပြင်ဆင် Jan နေရာပြောင်း… နေရာလည်းပြောင်းပြီး အားပါးတရ ရောင်းမယ်လို့ စိတ်က ကြံစည်ထားတာ..MM cu တွေ့ကိုလည်း နေရာသစ်လေးကို ပစ္စည်းအပြည့်ဖြည့်ပြီး ကြွားမယ်ပေါ့ (အဟီး ) ..၀န်ထမ်းတွေ့လည်း အသစ်ထပ်တိုးထားတယ် … နေရာလည်းပြောင်း လူအင်အားလည်း တိုး၊ ကျွန်တော်တို့လည်း စရောင်းမယ်လုပ်ရော .. အမောင်ဝူဟန်က စလာရော .. ပစ္စည်းတွေ့ မှာလို့ ပြုလို့မရ..နဲ ပစ္စည်းတွေ့တောင် တဖြည်းဖြည်း လျှော့လာတယ် … ပုံရိုက်တင်ဖို့တောင် ပစ္စည်းမရှိလို့ စတိုခန်းကို မရိုက်ပြရသေးဘူး .. ပစ္စည်းနည်းလို့ပဲလား မင်မင်တို့ပဲ ညံလို့လား မသိ ရောင်းအားက တဖြည်းဖြည်း ကျလာတယ် .. မင်မင် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ် ဒီ Feb ၁လက .. မိတ်ဆွေ့တို့ကော ဘယ်လို့နေလဲ .. ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်ထက်ဆိုးတဲ့လူတွေ့ရှိပါသေးတယ် ကိုယ်တွေ့ကမှ ရောင်းရရ…
MM ဈေးဝယ်သူများရဲ့ အလှူငွေအအား 8.5.2019 တွင် မျိုးဆက်သစ် မိဘမေတ္တာ ပရဟိတာ ဂေဟာတွေ့ တနေ့တာ အာဟာရ လှူဒါန်းခြင်း
2019-03-20 2019-03-20 Cherry Mask0 comment
ငွေလှရတနာ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွါးရေး အလှူတော်
2019-02-20 2019-02-20 Cherry Mask0 comment
တချို့တွေ့ကတော့ ထင်ကြမယ် MM က တခါလှူတိုင်း တခါ တင်တယ် ငွေပမာဏလည်း အများကြီး မဟုတ်ပဲနဲ့…. ငါတို့ဆို ဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်လှူလှူ ဒီလို့မဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်တွေးနေတဲ့ လူတွေ့လည်း ရှိကောင်းရှိမယ် အမှန်တော့ မဟုတ်ရပါဘူးးဗျာ.. MM တည်ရှိစဉ်ကာလတလျှောက် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်အထိ လောကီလူသားတွေ့ကို ကူညီပေးနိုင်ခဲ့သလဲ … လောကုတ္တရာအကျိုးအတွက်ကော ဘယ်ရွှေဘယ်မျှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ကိုယ်ဘာသာကိုယ် မှတ်တိုင်လေးတွေ့ စိုက်ထားပေးသည် သဘောဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ MM ကလှူတယ်ဆိုတာMM customers တွေ့ရဲ့ဝယ်ယူငွေထဲက တချို့ကို လိုအပ်သောနေရာတွေ့မှာ အုတ်တချပ် ၊သဲတပွင့်အနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်စား လှူဒါန်းပေးခြင်းဖြစ်တာပါ … ကျွန်တော်တို့တွေ့ကတော့ ဝေယျာဝစ္စ ကုသိုလ်ရပါတယ် … အခုဒီတခါလည်း MM customers တွေ့ကိုယ်စား ကျွန်တော်တို့ တွေ့က ငွေလှရတနာ အဘိဓမမ္မာ ပြန့်ပွါးရေးတွင် လှူဒါန်းပေးပါမယ်ခင်ဗျာ … ဘာကြောင့် လှူဒါန်းရတာလဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်သည် သတ္တ၀ါတို့၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို အများဆုံး ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တရားဟောပြော ပို့ချပေးခြင်းသည်အလွန်ကြီးကျယ်သည့် ကောင်းမူလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ် .. ထိုဓမ္မဒေသနာ မရှိလျှင်သာသနာခေါ် (ဘုရား အဆုံးအမ) ကွယ်ပျောက်နိုင်သောကြောင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တဦးအနေနဲ့ သာသာနာတော် ပိုမို ပြန့်ပွားနိုင်အောင် ရည်ရွယ်၍ လှူဒါန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အောက်ပါ ကောင်းမူ ကုသိုလ်များကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်…
10 Nov 2018 MM customers donation
2019-01-16 Cherry Mask0 comment
13 Dec 2017 MM customer’s donation
2019-01-16 2019-01-16 Cherry Mask0 comment
2018-11-20 Cherry Mask0 comment
The categories we supply include: sexual health products, family planning supplies, condoms, lubricants, lingerie, men’s external sprays, women’s help gels, male masturbation devices, female masturbation devices and other sex toys!
2018-07-01 Cherry Mask0 comment
Customer များရှင့်​ MM Online Shopping ၏ website design ကို ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲ ထားပါသဖြင့်​ ယခင်​ application များတွင်​update များ ဝင်​လာမည်​ မဟုတ်​​တော့ပါ။ မကြာခင်​ အချိန်​အတွင်းမှာ MM Online Shopping ၏ application အသစ်​ ဖြင့်​ customer များ မိမိလိုချင်​​သော products မျာကို တိုက်​ရိုက်​ order တင်​နိုင်​ပါမည်​။ဝယ်​ယူ အား​ပေး​သော customer များကို အထူး​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါသည်​။ MM Online Shopping https://mmonlineshopping.com/
Cherry Mask on Masturbation Cup with Vibrate
Luayelay on Masturbation Cup with Vibrate